Ogaden News Agency (ONA) – CWXO oo ka hortagay Ciidamo Itobiyaan ah oo xasuuq u yimid gobolada
CWXO oo ka hortagay Ciidamo Itobiyaan ah oo xasuuq u yimid gobolada
Warmurtiyeed Ciidan – JWXO
Ciidanka Itobiya ayaa bilaabay ololihii ay dadweynaha Ogadenya ay u gaysan jireen sanad walba. Ciidamo Itobiyaan ah oo kala yimid Wardheer, Qabridahe iyo Dhagaxbuur ayaa ka bilaabay dhoolatus iyo tababaro ay dadka shacabka ku waxyeeleeyaan agagaarka goobaha ay tababarka ku samaynayeen. Waxaa dhacday in guuto cidanka Itobiya ah oo ka soo kicitimay wardheer, Qoriile iyo Danood ay magaalada Caado isugu yimaadeen halkaasoo ay ka bilaabeen olole argagixin ah oy dadkii reer miyiga ahaa ee daganaa tuulooyinka agagaarka ah ay u gaysanayaan, iyagoo ku dilay agagaarka dad shacab ah oo gaadhaya 15, haween dhowr ahna ku kufsaday.
Ciidanka Wadaniga Xoreynta Ogadenya qaybta Heegan ayaa 17kii Bishan weerar ku qaaday ciidamadii cadawga ee dhibaatada ku hayay dadka shacabka ah, waxayna halkaa kaga dileen cadawga 50 askari meesha uu dhawacooda gaadahayo 70neeyo. Waxaa kaloo ay CWXO kaga furteen goobta saanad ciidan oo isgu jira 5 boobaha culus ee BKM iyo 40 boobaha fudud AK47 iyo rasaas xad dhaaf ah.
Weerar kale oo midkaa garab socda ayay CWXO ku qaadeen ciidamada cadawga o marayay aagga Dhagaxbuur iyo Qabridahre halkaasoo lagaga burburiyay cadawga afar gawaadhida ciidanka ah, iyagoo halkaa ku joojiyay ciidankii cadawga ee u socday inay xasuuqaan dadka shacabka ah. Waxaa dagaaladaa ka soo gaaray cadawga khasaare laxaad leh, iyadoo inta la hubo laga dilay goobta dagaalka 60 askari oo darajooyin kala duwan ah.